प्रचण्ड भावि प्रधानमन्त्री ? प्रधानमन्त्री ओलीले डाके आकस्मिक बैठक :: The First Nepali Magazine Published in Australia
प्रचण्ड भावि प्रधानमन्त्री ? प्रधानमन्त्री ओलीले डाके आकस्मिक बैठक
काठमाडौं— एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बुधवार लाजिम्पाटस्थित प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकले दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल, मधेशकेन्द्रित दललाई मिलाएर सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैबीच अध्यक्ष दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गरी एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले समेत सहमति जनाइसकेकाले त्यसदिशामा अघि बढेको जनाएका छन् ।
दाहालले सबै दललाई सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न अपील समेत गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा स्वाभिमानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार, राजनीतिक समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान, संविधानको कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणको कार्यमा वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको दाहालको आरोप छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित सत्तारुढ एमाओवादी समेत सरकारको विकल्पको खोजीमा लागेपछि अहिले एमाले स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ ।
यसैबीच, प्रमुख सत्ता साझेदार एकीकृत माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षीय दलहरुको बैठक बोलाएका छन् । माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धन नछाड्न आग्रह गर्ने अनुमान गरिएको छ । बैठकमा भाग लिन सत्ता रुढ दलहरु बालुवाटार पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरे लगत्तै राप्रपा नेपालले यही गठबन्धलाई निरन्तरत दिन आग्रह गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका एजेण्डा अघि बढाउने बेला सरकार परिवर्नतको खेलमा नलाग्न राप्रपा नेपालले विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा लगायत १६ दलको समर्थनमा गएको असोजमा सरकार बनेको थियो ।